News - Alibaba weghachite Tmall na Ndịda Ebe Ọwụwa Anyanwụ Eshia, Lazada ika nnukwu ụlọ ahịa LazMall kwalitere
Alibaba weghachiri Tmall na Ndịda Ọwụwa Anyanwụ Eshia, Lazada ika nnukwu ụlọ ahịa LazMall kwalitere
Emebere ememme mmemme ịzụ ahịa kwa afọ nke Lazada 9.9 na mba isii Ndịda Ọwụwa Anyanwụ Eshia. N'adịghị ka afọ ndị gara aga, Lazada kwupụtara ọkwa ọhụrụ nke ụlọ ahịa ọkaibe LazMall, n'oge ememme ịzụ ahịa 9.9 n'afọ a. Ndị na-enyere aka aka, ndị na-ere ahịa na ndị na-ekesa ikike ka ha jikọọ na ihe karịrị nde 70 ndị na-azụ ahịa na-arụ ọrụ na ikpo okwu Lazada iji wuo ikpo okwu e-commerce maka ụdị ụwa iji merie ahịa ndịda Ọwụwa Anyanwụ Eshia.
A na-ahụta Lazada dịka ụdị "Tmall" nke Ndịda Ọwụwa Anyanwụ Eshia, nke bụ nkwalite ọhụụ nke LazMall malitere. Na mgbakwunye na ịmalite akara ngosi ohuru ohuru, atụmatụ anọ ọhụụ gụnyere Beat the Price, Brands for You, Brand Directory, na Button Feature Button abatakwala na Ndịda Ọwụwa Anyanwụ Eshia. Lazada ehiwekwala usoro nkwụghachi ụgwọ na Ndịda Ọwụwa Anyanwụ Eshia iji hụ na ngwongwo ndị e rere n'elu ikpo okwu bụ eziokwu.
LazMall na-enye udiri azịza nke e-commerce dị ike, na-eme ka ọ dị mfe maka ụdị ọhụụ ịmeghe ụlọ ahịa na Lazada. Dị nwere ike tinye usoro iguzosi ike n'ihe ha n'ime ikpo okwu Lazada. Site na nyocha, nkwanye na LazLive ọrụ mgbasa ozi dị ndụ na-akwado nke akụrụngwa teknụzụ Lazada, yana akụrụngwa Lazada na arụmọrụ arụmọrụ na Ndịda Ọwụwa Anyanwụ Eshia, ọ ga-ewetara ndị na-azụ ahịa ahụmịhe ịzụ ahịa pụrụ iche.
LazMall bụ ụlọ ahịa dị n'ịntanetị na Ndịda Ebe Ọwụwa Anyanwụ Eshia. Ọnụ ọgụgụ ndị bi na ya amụbaala karịa oge itoolu kemgbe mmalite ya na 2018. Na nkeji nke abụọ nke 2020, ọnụọgụ ụdị ndị na-esonyere LazMall nwere ihe karịrị okpukpu abụọ kwa afọ, na iwu na nkeji iri na ise a nwere ihe karịrị okpukpu atọ. otu oge ahụ n'afọ gara aga.
Storeslọ ahịa ngalaba na ebe a na-ere ahịa na Ndịda Ọwụwa Anyanwụ Eshia emekwara ngwa ngwa ịbanye LazMall. Ka ọ dị ugbu a, ụdị ndị ama ama sonyere na LazMall gụnyere ndị ahịa 30 na Marina Square na Singapore na ndị ahịa 40 na Siam Center na Thailand. Sdị dịka Coach, Himalaya, MINISO, Coyan, Starbucks na Under Armor sonyekwara LazMall n'ime ọnwa isii gara aga.
Ka ọ dị ugbu a, ihe karịrị ụdị 18,000 ebiela na LazMall. Dị ka data si kwuo, ihe karịrị 80% nke ụdị ndị a na Forbes zuru ụwa ọnụ nke ndị ahịa na-ebi na LazMall.
Iji hụ na ngwongwo ndị erere n'elu ikpo okwu bụ ezigbo, LazMall mepụtakwara ụzọ nkwụghachi ụgwọ na Ndịda Ebe Ọwụwa Anyanwụ Eshia-ọ bụrụ na ndị na-azụ ahịa zụta ngwaahịa na-abụghị nke ezigbo na LazMall, Thailand na Malaysia ga-enye ụgwọ ahụ okpukpu ise, Singapore, Vietnam, Indonesia na Philippines Ahịa ga-enye ụgwọ ugboro abụọ. Na mgbakwunye, ikpo okwu na-enye ohere nloghachi dị mfe n'ime ụbọchị iri na ise.
Liu Xiuyun, onye isi oche na onye isi otu azụmaahịa azụmaahịa nke Lazada Group kwuru, sị: “LazMall na-arụ ọrụ dị mkpa na atụmatụ azụmaahịa Lazada. Ma aha obodo na nke mba dị iche iche nwere olile anya ịbawanye mmetụta na uto ha na Ndịda Ọwụwa Anyanwụ Eshia site na usoro ụzọ niile. Anyị ga-aga n'ihu itinye ego na akụrụngwa akụrụngwa yana ahụmịhe onye ọrụ iji kwado ndị mmekọ anyị na inye ndị ahịa ahịa ahịa na Ndịda Ọwụwa Anyanwụ Eshia. ”
Kemgbe ọ ghọrọ onye isi ahịa e-commerce nke Alibaba Group na Ndịda Ebe Ọwụwa Anyanwụ Eshia na 2016, Lazada eguzobewo teknụzụ dị elu, ngwa ọrụ na usoro ịkwụ ụgwọ na Ndịda Ebe Ọwụwa Anyanwụ Eshia site na enyemaka nke Alibaba''s atụmatụ ụwa na akụrụngwa dijitalụ, na Indonesia, Malaysia, Philippines, na Singapore. Ahịa mba isii, Thailand, na Vietnam enwetala mmepe ngwa ngwa.